Topnepalnews.com | देउवाले २६ महिनापछि गरेको पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा,को–को चिढिए ?
देउवाले २६ महिनापछि गरेको पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा,को–को चिढिए ?
Posted on: May 08, 2018 | views: 1096
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभपाति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन सम्पन्न भएको २६ महिनापछि गरेको पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा परेको छ । विधान बमोजिम पदाधिकारीको नाम सभापति शेरबहदुर देउवाले महाधिवेशन भएको २ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने थियो । तर उनले दुई बर्षपछि अर्थात विधान विपरित गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सर्मनाक हार व्यहोरेका डा. प्रकाशशरण महतलाई सह–महामन्त्री नियुक्त गरेपछि सर्वत्र विरोध र असन्तुष्टी बढेको छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको क्रममा अमेरिका रहेका डा. महत २०५३ सालमा नेपाल आएका थिए । महतलाई सहमहामन्त्री नियुक्त गरेपछि देउवाका विश्वास पात्र भनेर चिनिएका नेपाल बिद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्षत्रय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँड र एनपी साउद देउवासँग चिढिएका छन् । कांग्रेसको राजनीतिमा सम्भावना बोकेका यिवाहेक गुटको राजनीतिमा काविल मानिएका रमेश लेखक, मानबहादुर विश्वकर्मा र फरमुल्ला मन्सुर देउवासँग असन्तुष्ट भएका छन् ।
उपसभपातिमा नियुक्त गरिएका गान्धिवादी नेता महेन्द्रनारायण निधिका पुत्र विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापतिमा नियुक्त गरेकोमा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र गत असोज ३० गते नेपाली कांग्रेसमा पार्टी विलय गरेका विजयकुमार गच्छदार देउवासँग रिसाएका छन् । देउवाले गच्छदारलाई विधान परिवर्तन नभएको उपसभपाति बनाउन नसकिएको वाध्यता जनाएका थिए ।
गच्छदारले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाटै विधानको बाधा अड्काउ फुकाउको दफा प्रयोग गरी आफूसँग भएको सहमति अनुसार उपसभापतिसहित आफ्नो पार्टीबाट कांग्रेसमा आएका १५ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्न दबाब दिएका थिए । देउवाले पहिले गरिएका भद्र र मौखिक सहमति कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वनय नभए पछि गच्छदार देउवालाई छोडेर रामचन्द्र पौडेलको गुटमा लाग्ने कि भन्ने सम्मको तयारीमा लागेका छन् ।
गच्छेदारलाई महासमिति बैठकबाट विधान परिवर्तन गरी गच्छदालाई उपसभपाति बनाउने आश्वासन देउवाले दिए पनि आफूलाई भने भाउ नदिएको भन्दै अर्का बृद्ध नेता गोपालमान श्रेष्ठ भने देउवासँग गुनासो गर्न थालेका छन् । देउवालाई हरेक संकट पर्दा सहयोग गर्दै नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यावाहक सभापति समेत भएको इतिहास जहाँतहीँ सुनाउँदै हिँड्ने श्रेष्ठले आफूलाई उपसभापति बनाउन देउवापत्नी डा. आरजुको शरणमा समेत गएको चर्चा छ ।
देउवाले निधिलाई उपसभापति बनाए पनि गच्छदारलाई पछि उपसभापति बनाएर निधिको कदलाई साइजमा ल्याउने विश्वास गच्छदारलाई दिइसकेका छन् । देउवा प्यानलकै बालकृष्ण खाँडले आफूलाई महामन्त्री बनाउन दबाब दिँदै आएका थिए । तर आफूलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा खुम्च्याएको भन्दै खाँड पनि देउवालाई छोडेर प्रकाशमान सिंहमार्फत रामचन्द्र पौडेल गुटसँग वार्ता गर्न थालेका छन् ।
खाँड नेविसंघको सभापतिहुँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईको विश्वास पात्र थिए भने २०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल तरूण दल गठन गर्दा कोइराला गुटमा प्रवेस गरेका थिए । पछि देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनकै गुटमा प्रवेसश गरेका खाँड अवसर नपाए पौडेल गुटमा जान सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ ।
खाँडले आफूलाई डा. आरजु राणाले राजनीतिमा अघि बढ्न नदिएको गुनासो गर्न थालेका छन् । उनले महामन्त्री नपाए पनि सहमहामन्त्री बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका थिए । खाँडले डा. महतलाई आफूभन्दा धेरै जुनियर भएको बताउँदै आएका छन् ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले पनि आफूलाई देउवापत्नी आरजुले देख्न नसकेको र सहमहामन्त्री पनि नदिएको गुनासो गर्न थालेका छन् । साउद पनि कांग्रेसको महामन्त्रीका दाबेदार थिए ।
तर एनपीलाई उनकै गृह जिल्लाका नेता रमेश लेखकले रोकेको चर्चा बुढानिलकण्ठ निवासमा सुनिन थालेको छ । सहमहामन्त्रीको रेसमा दौडिएका लेखकलाई पछि राम्रो अवसर दिने भन्दै डा. आरजुले लेखकलाई थुम्थुम्याएर आफ्नो किचनका अन्धोभक्त डा. महतलाई सहमहामन्त्री बनाएकी छिन् ।
महामन्त्रीमा नियुक्त भएका पूर्णबहादुर खड्काको भने कसैले पनि आलोचना गरेका छैनन् स्वच्छ र निश्कलंक क्षवि वोकेका खड्कालाई महामन्त्री बनाएर देउवाले आफूमााथि लागेका सबै आक्षेप र आरोपलाई पखाल्न खोजेको आंकलन गरिन्छ ।
सहमहामन्त्री नपाए पछि दुई बर्षअघि मात्र देउवा गुटमा कोइराला गुटबाट आएका मानबहादुर विश्वकर्माले सुजाता कोइराला मार्फत देउवा गुट छोड्ने बिषयमा सल्लाह गरेका छन् । उनले देउवाले आफूलाई धोका दिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
देउवालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनदेखि नै देउवा गुट छोडेका अर्जुननरसिंक केसी यतिवेला पोडेल गुटमा टाँसिइसकेका छन् भने चन्द्र भण्डारीले पनि देउवालाई छोडेर यूवा केन्द्रीय सदस्यहरूको बेग्लै गुट खडा गरिसकेका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा देउवालाई सहयोग गरेका कृष्णप्रसाद सिटौला र उनको गुटले समेत देउवालाई पूर्णरूपमा असहयोग गर्ने जनाइ सकेको छ ।
देउवाका हरेक निर्णयलाई असयोग गर्दै आएको नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूले भने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा देउवाले पेलेको महसुस गरेका छन् । उनीहरूले चुनावी समिक्षाको बेला दिएको सुझावलाई ग्रहण नगरेको र पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै छलफल नै गर्न नदिएर पास गरेको भन्दै गुनासो पोखेका छन् । उनीहरूले आगामी जेठ मसान्तभित्र हुने जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा देउवाको उछितो काड्ने योजना बनाएका छन् ।
पौडेलको असन्तुष्ट धारको गुटमा रहेका महामन्त्री डा. शशांका कोइराला भने अहिले पौडेलको लाईनबाट अलग भएका छन् । उनले देउवा र पौडेल कसैलाई पनि सहयोग गरेका छैनन् । देउवाले आगामी महाधिवेशनमा उपसभापतिमा मनोनित गरेर कार्याबाहक सभापति बनाउँछु भन्ने आश्वासन पाएर मक्ख भएर बसेको कोइराला यतिवेला सहमति, एकताको मात्र कुरा गरेर देउवालाई समर्थन गर्दै आएका छन् ।
उनले देउवाले केही दिनमा गठन गर्ने विभागमा आफ्ना मान्छेलाई हाल्ने बिषयमा सम्झौता र सौदाबाजी गरिरहेका छन् । कोइरालालाई यतिवेला डा. नारायण खड्का, डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, सुजाता कोइराला र दीपक गिरीले साथ दिइरहेका छन् ।